WARAYSI CAJIIB AH OO AAN LA YEELANAY AXSAN LAACIB SHIIKHAALOOW Login
Current Articles Archives Search WARAYSI CAJIIB AH OO AAN LA YEELANAY AXSAN LAACIB SHIIKHAALOOW
Written by webmaster at 5:51 PM on Thursday, November 29, 2007 Tweet
Waxaa Illaah mahadii ah in aan la kulano, oo aan waraysano mid ka mid ah xidigihii laacibiinteenii Soomaaliyeed (Legends) ee kubadda cagta dheeli jiray wixii ka horeeyey 1991-gii. Laacibkaas oo aan dhihi karo wuxuu magac, sharaf iyo sumcad waynba ku lahaa dalkeena iyo dadkeenaba. Qofkii maqla magaciisa, ama arko muuqiisa ee ka mid ah bahdii xiisayn jirtay ciyaarihii dalka, qaasatan kubadda cagta berisamaadkii, waxaa hubaal ah inuu markiiba soo xasuusanayoShiikhaaloow midka uu yahay, hase yeeshee qaar badan oo ka mid ah dhalinta da'da yare e maanta ciyaarta ama daawata ama xiiseeysa isboortiga waxaa lagayabaa in aanay maqal magacaas.
Shiikhaaloow wuxuu ku dhashay degmada Shibis ee gobolka Banaadrir sanadkii 1958-dii, waxbarashadiisa dugsiga sare iyo dhexe wuxuu ku dhamaystay isla degmada Shibis. Shiikhaaloow wuxuu ahaa hadaan afkayga beenta ka reebo, ciyaartooyda Soomaaliya kubadda cagta ciyaari jirtay ama soo martay taariikhda, hadii la yiraahdo kee ugu fiicnaa? Mid u soo istaagi karo in uu kaalinta koowaad soo galo, inkastoo ay akhristayaasheena ay fikrad ka duwan ka qabi karaan ra'yigayga.
Kooxda cusub ee loo bar baarinaayo Minishiibiyo
Shiikhaaloow: cayaaraha waxaan bilaabey sanadii 1972-dii anigoo u cayaaray xulka degmada Shibis waxaana ku guuleysanay sanadkaas koobkii degmooyinka gobalka Banaadir oo aan ka qaadnay degmada Xamarweyne. Isla sanadkaas hadana waxaa la ii qaatay xulka gobalka Banaadir, waxaana imaanay cayaarta kama danbeynta ah (final), in kastoo ay koobkii naga qaadeen xulkii gobalka Jubada Hoose. Kubadda: Goormee ayaad ku biirtay kooxihii heerka koowaad, naadigeedse u dheeshay?
Shiikhaaloow: Intii aan u cayaarayay naadiga D/hoose waxaan kula guuleestay sanadkii 1975 - 1976 oo aan ku guuleeysanay horyaalkii dalka iyo anigoo ku guuleystay iskoorkii gool dhalinta. 1984 waxaan ku guuleysanay koobkii Jenaraal Daa'uud. 1985 - 1986 waxaan ku guuleysanay horiyaalkii dalka. Xagga gool dhalintana sanadkaas aniga ayaa ku guuleystay.
Shiikhaaloow: Xilkii iigu horeeyay ee isboorti ee aan qabto wuxuu ahaa sanadkii 1988-dii anigoo macalin u noqdey ciyaartoydii mataleysay Naadiga Muqdisho ee u ambabaxaysey dalka Sacuudiga, ka dib burburkii markuu dhacay waxaan noqday macalin waxaana soo leyliyay kooxo fara badan oo dalka iyo dibaddaba ah. Hadii aan ku hormaro dibada waxaan macalin u noqday koox la oran jiray Tadaamun oo ka dhisneyd gobalka la yiraahdo Cataq oo ka tirsan dalka Yaman, kooxdaas waxey ka mid aheyd kooxaha heerka 2-aad ee dalka Yaman, waxaan u soo dalacsiiyay heerka 1-aad, ka dib waxaan dib ugu soo laabtay Soomaaliya sanadkii 1997-dii.
Kadib waxaana bilaabay in aan tababar siiyo kooxo badan oo ka dhisnaa dalka. Sanadkii 1997 - 99 waxaan macalin u ahaa kooxda la yiraahdo Kesko. Sanadkii 1999 - 2000 waxaan macalin u ahaa koox la yiraahdo Gasko. Sanadkii 2000 - 2001 waxaan waday koox la dhaho Gaheyr. Sanadkii 2001 - 2003 waxaan waday koox la dhaho Dahabshiil, kooxahaas oo kuligood ka dhisnaa dalkeena.
Shiikhaaloow: Waxaan halkan mahad aan la soo koobi karin uga jeedinayaa websitka kubadda.com sida hagar la'aanta ah ee uu waqtigiisa u hurayo inuu bulshada u soo bandhigo taariikhihii hore ee isboorti iyo kuwa maantaba. Shiikhaaloow oo cashar bixinaayo
Waxaa soo waraystay: Mahad Axmed Tagoow Kubadda.com - Xaruunta Muqdisho
12271 Views :: 302 Comments :: :: Sports News, Football